आजदेखि मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्दै निर्वाचन आयोग, नागरिकताबाट पनि मत दिन पाइने – Sandes Post
आजदेखि मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्दै निर्वाचन आयोग, नागरिकताबाट पनि मत दिन पाइने
May 11, 2022 578
काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले सबै मतदान स्थलबाट आज र भोली मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ।
मतदान केन्द्रका लागि खटिएका मतदान टोलीहरूबाट मतदाता परिचय पत्र वितरणका काम हुने आयोगले भनेको छ ।
पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका नयाँ मतदाता र परिचय पत्र हराएको भन्दै सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएका मतदातालाई वैशाख २८ र २९ मा मतदान स्थलहरूबाट मतदाता परिचय पत्र दिन लागिएको हो।
यस्तै आयोगले सोही समयमा मतदाता शिक्षा पनि दिने भएको छ। मतदान गर्ने सहि तरिकासम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि मतदाता नामावलीमा नाम भए नागरिकता देखाउँदा पनि भोट हाल्न पाइने आयोगले बताइ सकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिकता भएका सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मतदानका लागि परिचयपत्र अनिवार्य हो कि नागरिकताले पनि पाउने भन्ने प्रश्नमा उहाँले नागरिकता प्राप्त गरेका सवै नागरिकले मतदान गर्ने पाउने गरि व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
‘सबै तहको निर्वाचनको निम्ति पहिलो सर्त भनेको मतदाता नामावली हो । मतदाता नामावलीको पूर्वसर्त भनेको नागरिकताको प्राप्ति हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस कारण नागरिकता प्राप्त गरेर वडा विभाजन भित्र परेका ६ हजार ७ सय ४३ वडा भित्रका सबै नागरिकले जो मतदाता छन् । उनीहरूले मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ ।’
Prevयी ४ राशिका पुरुषले पाउछन् अप्सरा जस्तै श्रीमती ! तपाईको राशी कुन ?
Nextआजबाट ६ दिन विद्यालय बन्द हुने